Ny tena maha izy antsika - Church of God Switzerland of the World
Iza moa izahay? > Ny ivon'ny WKG > Ny maha-isika antsika marina
Matetika dia matetika no tsy maintsy manonona anarana ianao mba ho misy dikany sy manan-danja amin'ny hafa sy amin'ny tenanao. Toa ny olona mitady fikarohana tsy manam-paharoa momba ny maha-izy azy sy ny dikany. Fa efa nilaza i Jesosy hoe: “Izay mahita ny ainy no hahavery azy; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko dia hahita izany. ”(Matio 10:39). Amin'ny maha fiangonana antsika dia nianatra avy amin'ity fahamarinana ity isika. Niantso ny tenantsika hoe Grace Communion International nanomboka ny taona 2009 izahay ary io anarana io dia manondro ny tena maha izy antsika, izay miorina ao amin'i Jesosy fa tsy amintsika. Andao jerena akaiky ity anarana ity ary fantaro izay miafina ao.
Ny fahasoavana no teny voalohany amin'ny anarantsika satria izy io dia mamaritra tsara indrindra ny diantsika manokana sy iraisana mankany amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina. "Fa kosa, mino isika fa ny fahasoavan'i Jesosy Tompo no hamonjy antsika, tahaka azy ireo koa" (Asa. 15:11). "Marina nefa tsy mendrika ny fahasoavany noho ny fanavotana izay tonga tamin'ny alalan'i Kristy Jesosy" (Romana 3:24). Amin'ny fahasoavana irery ihany no avelan'Andriamanitra (amin'ny alàlan'i Kristy) handray ny fahamarinany manokana. Mampianatra hatrany ny Baiboly fa ny hafatry ny finoana dia hafatra momba ny fahasoavan'Andriamanitra (jereo ny Asan'ny Apôstôly 14–3; 20–24; 20–32).
Ny faharesen-dahatra antsika eo ambanin'ny lalàna dia voamarina sy marina. Tsy mahazo fitondran-tena tiantsika isika satria tsy gadra ny lalàny sy ny ara-dalàna Andriamanitra. Andriamanitra ao anatintsika dia miasa amin'ny fahalalahana masina araka ny sitrapony.
Ny sitrapony dia faritana amin'ny fahasoavana sy ny fanavotana. Nanoratra toy izao ny apôstôly Paoly: «Tsy mba mahafoy ny fahasoavan'Andriamanitra aho; fa raha avy amin'ny lalàna ny fahamarinana, dia foana foana ny fahafatesan'i Kristy. ”(Galatianina 2:21). Nofaritan'i Paoly ho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany no hany safidy tsy tiany ariana. Ny fahasoavana dia tsy zavatra azo lanjaina ary refesina ary arahana. Ny fahasoavana dia ny fahatsaram-piainan'Andriamanitra velona amin'ny alalany ny fon'ny olombelona sy ny sainy ary manova izy roa.
Tao amin'ny taratasiny ho an'ny fiangonana tany Roma dia nanoratra i Paul fa ny hany zavatra ezahantsika hahatongavana amin'ny ezaka ataontsika dia ny karaman'ny ota, ny fahafatesana ihany.Izany no vaovao ratsy. Fa misy ihany koa ny tsara indrindra, satria "ny fanomezana dia fiainana mandrakizay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika" (Romana 6:24). Jesosy dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Izy no famonjena nomen'Andriamanitra maimaimpoana ho an'ny olona rehetra.
Ny fiarahana no teny faharoa ao amin'ny anarantsika satria manana fifandraisana marina amin'ny Ray isika amin'ny alàlan'ny Zanaka amin'ny firaisana amin'ny Fanahy Masina. Ao amin'i Kristy dia manana firaisana tena amin'Andriamanitra sy amin'ny tsirairay isika. James Torrance dia nametraka izany toy izao: "Ny Triune Andriamanitra dia mamorona fiaraha-miombon'antoka amin'ny fomba iray fa isika ihany no tena olona raha nahita ny maha-izy antsika amin'ny fiarahana aminy sy amin'ny olon-kafa."
Ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina dia ao anatin’ny fiombonana tonga lafatra ary nivavaka i Jesosy mba hiombonan’ny mpianany izany fifandraisana izany ary hitaratra izany eo amin’izao tontolo izao ( Jaona 14:20; 17:23 ). Lazain’ny apostoly Jaona fa mamaka lalina amin’ny fitiavana io fiaraha-monina io. I Jaona dia mamaritra izany fitiavana lalina izany ho firaisana mandrakizay amin’ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny tena fifandraisana dia midika hoe miaina ao amin’i Kristy ao amin’ny fitiavan’ny Ray amin’ny alalan’ny Fanahy Masina (1. Jaona 4:8).
Voalaza matetika fa ny maha kristiana dia fifandraisana manokana amin'i Jesosy. Mampiasa fampitahana maromaro ny Baiboly hilazana izany fifandraisana izany. Ny iray miresaka ny fifandraisan'ny tompony amin'ny andevony. Niainga avy tamin'izany dia manaraka fa tokony hanome voninahitra an'i Jesosy Kristy Tompontsika sy hanaraka azy isika. Hoy koa i Jesosy tamin'ny mpanara-dia azy: “Tsy lazaiko hoe mpanompo intsony ianareo. fa ny mpanompo tsy mahalala izay ataon'ny tompony. Fa efa nolazaiko taminareo fa mpinamana ianareo; fa izay rehetra reko tamin'ny Raiko no nambarako taminareo »(Jao. 15:15). Ny sary iray hafa dia miresaka ny fifandraisan'ny ray sy ny zanany (Jaona 1: 12-13). Na ny sarin'ny mpampakatra sy ny ampakariny aza, izay efa hita ao amin'ny Testamenta Taloha, dia nampiasain'i Jesosy (Matio 9:15) ary i Paul dia nanoratra momba ny fifandraisan'ny mpivady (Efesiana 5). Ao amin'ny taratasy ho an'ny hebreo aza dia milaza koa fa amin'ny maha kristianina dia mpirahalahy sy rahavavin'i Jesosy isika (Heb. 2:11). Ireo sary rehetra ireo (andevo, namana, zanaka, vady, rahavavy, anadahy) dia misy ny fiarahamonina lalina, tsara ary manokana miaraka. Saingy sary daholo ireo rehetra ireo. Ny Andriamanitra telo izay iray no loharano sy fahamarinan'ity fifandraisana ity sy ity fiarahamonina ity. Vondrom-piarahamonina izay zarainy amin-katsaram-panahy amintsika amin'ny fahatsarany.
Nivavaka Jesosy mba hiaraka aminy mandrakizay sy hifaly amin'izany fahatsarana izany (Jao. 17:24). Tao anatin'ity vavaka ity dia nanasa antsika izy hiaina ao anatin'ny fiaraha-monina miaraka amin'ny Ray. Rehefa niakatra tany an-danitra i Jesoa dia naka antsika sakaizany hiaraka amin'ny Ray sy ny Fanahy Masina. Nilaza i Paoly fa amin'ny alàlan'ny Fanahy Masina dia misy fomba iray izay ipetrahantsika eo akaikin'i Kristy ary eo anatrehan'ny Ray (Efesiana 2: 6). Efa afaka miaina izany fiarahana amin'Andriamanitra izany isika ankehitriny, na dia hiseho ihany aza ny fahafenoan'ny fifandraisana amin'ny fotoana hiverenan'i Kristy sy hametrahany ny fanapahany. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fiarahamonina ao amin'ny vondrom-pinoana misy antsika. Ny maha-izy antsika, ankehitriny sy mandrakizay, dia miorina ao amin'i Kristy ary ao amin'ny fiombonam-panahy nozarain'Andriamanitra amintsika ho Ray, Zanaka ary Fanahy Masina.
Ny sehatra iraisam-pirenena no teny fahatelo amin'ny anarantsika satria fikambanana misy antsika iraisam-pirenena ny fiangonantsika. Tonga amin'ny olona manerana ny sisin'ny kolontsaina, fiteny ary fiteny nasionaly isika - tonga amin'ny olona manerantany. Na dia antokonolona aza isika statistika dia misy vondrom-piarahamonina isaky ny fanjakana amerikana ary koa any Canada, Mexico, Karaiba, Amerika Atsimo, Eropa, Azia, Aostralia, Afrika ary any amin'ny Nosy Pasifika. Manana mpikambana maherin'ny 50.000 izahay any amin'ny firenena 70 mahery izay mahita trano any amin'ny fiangonana 900 mahery.
Nentin'Andriamanitra miaraka eto amin'ity vondrona iraisampirenena ity isika. Fitahiana tokoa fa lehibe isika miara-miasa nefa kely sisa fa mbola anjarantsika manokana ireo fiarahana miasa ireo. Ao amin'ny vondrom-piarahamonina eto amintsika, ny fisakaizana no ampiorina tsy tapaka sy hambolena manerana ny sisin'ny firenena sy ny kolontsaina, izay matetika mizara ny tontolontsika. Izy io dia tena mariky ny fahasoavan'Andriamanitra!
Amin'ny maha-fiangonana antsika, dia zava-dehibe ny miaina sy mizara ny filazantsara izay napetrak'Andriamanitra tao am-pontsika. Na dia ny fanandramana ny haben'ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavana aza dia manosika antsika hizara ny vaovao tsara amin'ny olona hafa. Tiantsika ny olona hafa hiditra sy hihazona fifandraisana amin'i Jesosy Kristy ary handray anjara amin'ity fifaliana ity. Tsy afaka mihazona ny tsiambaratelon'ny filazantsara isika satria tiantsika ny hiaina ny fahasoavan'Andriamanitra ary ho tonga ampahan'ny vondron'olona telo. Izany no hafatra nomen'Andriamanitra antsika hizara an'izao tontolo izao.